ကျွန်မတို့ မိန်းကလေးတွေဟာ ပျှမ်းမျှအားဖြင့် အသက် (၁၃)၊ (၁၄)နှစ်လောက်မှာ ရာသီသွေးစပေါ်ပြီး အပျိုဖေါ်ဝင်ကာစဖြစ်သည်။ အစပထမမှာ လစဉ်မမှန်သေးပေမယ့် ပျောက်လိုက်ပေါ်လိုက်နဲ့ အစပြုပြီး နောက်ပိုင်းမှာလစဉ်မှန်သွားပါသည်။ ဒီလိုရာသီသွေးစပေါ်ပြီး အပျိုဖေါ်ဝင်ပြီဆိုတာနဲ့ ကျွန်မတို့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက ဟိုမုန်းဓါတ်တွေဖွံ့ဖြိုးပြောင်းလဲမှုကြောင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှစ်မျိုးစလုံးမှာ ပြောင်းလဲမှုများ သိသိသာသာဖြစ်ပေါ်လာပါတော့သည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတော့ ကျွန်မတို့ရဲ့ ရင်သားနို့လေးတွေဟာ တစ်ဖြေးဖြေးစူထွက်လာပြီး ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုစတင်လာပါတော့သည်။ ချိုင်းမွှေးလေးတွေစပြီး ပေါက်လာတတ်သလို ပေါင်ကြားက အင်္ဂါဇာတ်မှာလည်း အမွှေးလေးတွေအစပြုပြီး ပေါက်လာပါသည်။ တင်သားတွေလည်း ကားလာပါသည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲလာမှုအနေနဲ့ကတော့ ကျွန်မတို့ မိန်းကလေးတွေက အပျိုဖြစ်ပြီးတာနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ယောင်္ကျားလေးတွေကို အရင်တုံးကထက်ပိုပြီး သတိထားလာမိပါသည်။ အချစ်စိတ်ဆိုတာလည်း အဲဒီအချိန်ကစပြီး ကျွန်မတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာစ၍ သန္ဓေတည်ခဲ့ရပါသည်။
ငယ်စဉ်ခလေးဘ၀တုန်းက မိန်းခလေးသဘာဝလှချင်ပချင်တာရှိခဲ့ပေမယ့် အပျိုဖြစ်လာတာနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့အလှအပတွေကို ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ယောင်္ကျားလေးတွေ သတိထားမိစေ
ချင်သည်။ ကိုယ့်ရဲ့အလှအပကို ယောင်္ကျားလေးတွေမြင်စေချင်တယ်။ ဂရုတစိုက်ရှိစေချင်လာပါသည်။ ဒီလိုဖြစ်အောင်လည်း အလှအပကို အရင်တုန်းကထက် ပိုပြင်၊ ပိုဂရုစိုက်ပြီး မြင်
သာထင်သာအောင် နေတတ် ထိုင်တတ်တာမျိုးတွေ လုပ်လာပါသည်။ ဒါကိုအများက အပျိုလုပ်သည် ဟု ကင်ပွန်းတပ်ကြပါသည်။ နောက်အသက်(၁၅) (၁၆)နှစ်လောက်ရောက်လာ
တော့ ကျွန်မတို့ မိန်းခလေးတွေဟာ ကိုယ့်ရဲ့အလှအပကို ယောင်္ကျားလေးတွေက ဂရုတစိုက်ရှိရုံသာ မဟုတ်တော့ဘဲ ယစ်မူးစွဲလန်းစေချင်လာပါသည်။ ဒါ့အပြင် ယောင်္ကျားလေးတွေ
နဲ့လက်ပွန်းတတီး နေရတာရင်းရင်းနှီးနှီးနေရတာတွေကို ခုံမင်လာပြီး မိန်းခလေးတွေမှာ လိင်စိတ်တွေ ပေါ်လာတာကို ဒီအသက်အရွယ်မှာထင်ထင်ရှားရှား သိသာလာရပါသည်။
[/left]ဒီအချိန်မှာဘဲ ကျွန်မတို့မိန်းခလေးတွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ယောင်္ကျားလေးတစ်ဦးတစ်ယောက်ကို စွဲလန်းတာမျိုး အဲဒီယောင်္ကျားလေးနဲ့ အတူအနားမှာရှိနေတာ ရင်ထဲမှာကြည်နူး
ကျေနပ်နေရတာမျိုးတွေကနေစပြီး အဲဒီယောင်္ကျားလေးကနေ ကိုယ့်ကိုလာပြီးထိတာကိုင်တာ၊ နမ်းတာမျိုးတွေကို လိုလိုလားလား ဆန္ဒတွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါသည်။ ဒီကနေစပြီး
ကျွန်မတို့ မိန်းခလေးတွေဟာ ရည်းစားတွေထားကြပြီး ကာမမှုကို ရှေးရှုလာပါတော့သည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုတွေမှာလည်း ဒီအချိန်မှာ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ အင်္ဂါရပ်တွေ
ပြည့်စုံလာပြီဆိုတော့ သွေးသားတွေဆူဖြိုးထကြွလာတာကလည်း မဆန်းလှပါပေ။
[/left]အခုဆိုလျှင် ခင်သက်ဦး လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်မအသက်ဟာ (၁၇)နှစ်ပြည့်ပြီးသွားပါပြီ။ (၁၀)တန်းအောင်ပြီးလို့ တက္ကသိုလ်ဝင်ဖို့ကိစ္စတွေ လုပ်နေရပါသည်။ ဒီအချိန်ထိတော့ ကျွန်မ
မှာရည်းစားချစ်သူရယ်လို့ မရှိသေးပါ။ ဒါပေမယ့် ယောင်္ကျားတစ်ယောက် ဖက်နမ်းတာကိုတော့ ကျွန်မပယ်ပယ်နယ်နယ်ခံခဲ့ရဖူးပါတယ်။ ကျွန်မတို့ အိမ်ကနှစ်ထပ်အိမ်ပါ။ အပေါ်ထပ်မှာ
အိမ်ရှင်တွေနေပြီး အောက်ထပ်ကိုတော့ ကျွန်မတို့ငှားနေပါသည်။ အိမ်ရှင်တွေရဲ့ အပေါ်ထပ်ကို အိမ်ဘေးကလှေခါးကနေတက်ရပြီး သူတို့လှေခါးခြေရင်းနဲ့ ကျွန်မတို့အိမ်အောက်ထပ်
၀င်ပေါက်နဲ့က ကပ်နေသည်။ အိမ်ရှင် အန်တီကြီးက ကုမ္ပဏီမှာ အလုပ်လုပ်ပြီး သူ့မှာသားတစ်ယောက်ရှိပါသည်။ သူ့သားက နာမည် ထူးမော်လို့ခေါ်ပြီး အသက်က(၂၅)နှစ်လောက်
ရှိနေပြီဖြစ်ပေမယ့် ဘာအလုပ်အကိုင်မှ မယ်မယ်ရရမရှိ။ ဘီယာလေးတမြမြနဲ့ လေနေတဲ့သူဖြစ်ပါသည်။
[/left]ကျွန်မ အဖေနဲ့အမေက ရန်ကင်းဈေးထဲမှာ အထည်ဆိုင်ဖွင့်ထားသည့်အတွက် မိုးမလင်းမှီထသွားပြီး မိုးချုပ်မှအိမ်ကိုပြန်ရောက်ကြပါသည်။ တစ်နေ့ကြတော့ ညနေမှောင်စပျိုး
နေတဲ့အချိန်မှာ အမေနဲ့အဖေတို့ အိမ်ပြန်အလာ စောင့်မျှော်ရင်း အိမ်ဝင်ပေါက် ထွက်ပေါက်ဘေးမှာ ထောင့်ဖြတ်လေးထိုင်ပြီး မျှော်နေမိပါသည်။ ဒီအချိန်မှာဘဲ အပေါ်ထပ်တက်တဲ့
လှေခါးခြေရင်းဘက်ကနေ လူတစ်ယောက်ဟာ ကျွန်မရှေ့ကို ရိပ်ကနဲရောက်လာလို့ ကျွန်မဟာလန့်ပြီးမတ်တပ်ထရပ် လိုက်မိပါသည်။
[/left]သူက ကျွန်မကိုဘာမှပြန်မပြောဘဲ ကျွန်မကိုယ်လုံးကို လှမ်းပြီးဖက်လိုက်ပါသည်။
[/left]ကိုထူးမော်က မလွှတ်တဲ့အပြင် ကျွန်မမျက်နှာနဲ့ ဆံပင်တွေကိုနမ်းရင်း ကျွန်မတင်သားတွေနဲ့ ရင်သားတွေကို သူ့လက်တစ်ဖက်နဲ့ စုန်ချီဆန်ချီဆုပ်နယ်နေပါသည်။ ကျွန်မအတင်း
ရုန်းကန်နေပေမယ့် သူ့လက်ကြီးတစ်ဖက်က ကျွန်မခါးကို အသေဖက်ထားတာကြောင့်ကျွန်မဘယ်လိုမှ မလွတ်နိုင်ပါ။ ကျွန်မတစ်ကိုယ်လုံး ဖိန်းရှိန်းပြီးတုန်တုန်ယင်ယင်တောင် ဖြစ်လာ
ရပါသည်။ သူ့မျက်နှာနဲ့ လွတ်အောင်ကျွန်မ မျက်နှာကို ရှောင်ရှားပေမယ့် ဘယ်လိုမှမလွတ်နိုင်ဘဲ တစ်ချီမှာတော့ ကျွန်မရဲ့ နှင်းဆီဖူးနှုတ်ခမ်းလေးတွေဟာ သူ့နှုတ်ခမ်းတွေကြားပါသွား
[/left]အို….ရှင်ရယ်…ကျွန်မဖြင့် လေထဲကိုမြောက်တက်လွင့်မျောသွားရသလိုပါဘဲ…….ယောင်ယောင်ပြီးသူ့လက်မောင်းကြီးတစ်ဖက်ကို ကျွန်မလက်လေးတစ်ဖက်နဲ့ လှမ်းကိုင်ဆုပ်
မိတဲ့အထိပါ။ ဒီအချိန်မှာဘဲ အိမ်ရှေ့လမ်းမပေါ်ကိုဖြတ်လျှောက်လာတဲ့ လူသံတွေကြားရလို့ သူကကျွန်မကိုလွှတ်ပေးပြီး အပေါ်ထပ်တက်တဲ့လှေခါးကို တဒိုင်းဒိုင်းပြေးတက်သွားပါသည်။
ဒီလိုပြေးထွက်သွားတာတောင် မမှီမကမ်းနဲ့ ကျွန်မနို့တစ်ဖက်ကို လှမ်းပြီးညှစ်သွားပါသေးသည်။ ကျွန်မကတော့ နေရာမှာဘဲ တုန်တုန်ယင်ယင်နဲ့ရပ်ပြီး ကျန်ခဲ့ရပါသည်။ ဆန့်ကျန်ဘက်
[/left]အဲ့ဒီနေ့ညမှာ ကျွန်မတစ်ညလုံး အိပ်မပျော်ဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။ နောက်နေ့တွေမှာလည်း ကျွန်မဟာသတိရတိုင်း ကျွန်မရဲ့နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့စမ်းစမ်းကြည့်
မိရပါသည်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မအိမ်မှာ တစ်ယောက်ထဲတော့ ကြာကြာမနေတော့ပါ။ ကျွန်မတို့အိမ်နှင့် ငါးအိမ်ခြားလောက်မှာ ကျွန်မရဲ့သူငယ်ချင်း ဇင်ဖြူဆိုတာရှိပါသည်။ အဲဒီသူငယ်ချင်း
အိမ်မှာကျွန်မတစ်နေကုန်သွားနေတတ်ပါသည်။ ဇင်ဖြူက ကျွန်မထက်စွံပါသည်။ သူကရည်းစားရတာ တစ်နှစ်လောက်တောင်ရှိပါပြီ။ ဇင်ဖြူရည်းစားက ကိုသက်တဲ့ ဇင်ဖြူထက် အသက်
[/left]နေ့တစ်နေ့မှာ ကျွန်မဟာ မနက်စာထမင်းစားပြီးတာနဲ့ ထုံးစံအတိုင်း အိမ်တံခါးပိတ်ပြီး ဇင်ဖြူတို့အိမ်ကို ထွက်လာခဲ့ပါသည်။ အိမ်ရှေ့ဧည့်ခန်းထဲမှာ ဇင်ဖြူကို မတွေ့တော့ အခန်း
ထဲမှာရှိမှာပဲဆိုပြီး အိမ်အတွင်းပိုင်းကိုဝင်အလာ အထဲကကြားလိုက်ရတဲ့အသံတိုးတိုးလေးတွေကြောင့် ကျွန်မခြေလှမ်းတွေ တန့်သွားရပါသည်။ အသံက ယောင်္ကျားသံပါကြားလိုက်ရ၍
ဖြစ်သည်။ ကျွန်မရပ်ပြီးလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ အိပ်ခန်းတံခါးကပိတ်မထားဘဲဟနေတာကြောင့် ကျွန်မသည် ခြေဖွနင်းပြီးတံခါးဝကို ကပ်လိုက်ရာက အထဲကိုကြည့်လိုက်မိပါသည်။
[/left]ကျွန်မတစ်ကိုယ်လုံးထူပူသွားရပါသည်။ ဇင်ဖြူက ကုတင်ပေါ်မှာ ပက်လက်ကလေး အပေါ်ပိုင်းဘာအ၀တ်အစားမှမရှိ။ ဇင်ဖြူအသားလေးတွေက ၀င်းမွတ်၍နေပြီး နို့အုံလေးတွေ
ကမထိရက် မကိုင်ရက်စရာဖြစ်နေသည်။ ကိုသက်က ဇင်ဖြူ၏နို့တွေကို အားပါးတရကုန်းပြီးစို့နေကာ ကိုသက်၏ ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းမှာလည်း ဘာအ၀တ်အစားမှမရှိပါ။
ဇင်ဖြူက ကိုသက်၏ ကျောကိုပွတ်ပေးရင်း ပြောလိုက်သည်။ ဇင်ဖြူမူယာတွေများနေကြောင်း ကျွန်မသိလိုက်သည်။ ကြည့်လေ ကြောက်တယ်ပြောတဲ့ ဇင်ဖြူရဲ့မျက်နှာက အပြုံးမပျက်
ကိုသက်ကို ငံ့လင့်နေတဲ့ပုံစံ၊ ကောင်မတတ်လဲတတ်နိုင်တယ်…´´။ ဇင်ဖြူရဲ့နို့အုံတွေက အသားဖြူသူမို့ နီရဲနေကြောင်းသိသာလှပါသည်။ ဇင်ဖြူရဲ့ နို့သီးလေးတွေက ထောင်တက်လာ
သလို ကျွန်မရဲ့စိတ်တွေကလည်း ထ၍လာရပါသည်။ အာခေါင်တွေလည်းခြောက်လာပြီး ရှေ့ကိုနဲနဲတိုးပြီးကြည့်လိုက်မိပါသည်။ အ၀တ်တွေပေါ်မှာဘဲ ကိုသက်လက်က ဇင်ဖြူ၏ ဆီးခုံနေ
ရာကို လက်ဖ၀ါးနဲ့အုပ်ပြီး ပွတ်လိုက်ရာမှ ဇင်ဖြူခါးမှစကပ်လေးကို လှန်တင်လိုက်ပါသည်။ ထို့နောက် ကိုသက်၏လက်တွေက ဇင်ဖြူ၏ပေါင်တံဖွေးဖွေးလေးတွေကို ပွတ်လိုက် ဆီးခုံမို့မို့
လေးကို အတွင်းခံဘောင်းဘီလေးပေါ်မှ ပွတ်လိုက်လုပ်ရင်း ဇင်ဖြူ၏စကပ်လေးကို ချွတ်ပစ်လိုက်ပါတော့သည်။
အတွင်းခံဘောင်းဘီပန်းရောင်လေးက ထင်းထင်းလင်းလင်းဖြစ်သွားသည်။ ပြားချပ်တင်းမာနေသော ၀မ်းဗိုက်သားအောက်မှ စောက်ဖုတ်လေးက ခုံးပြီးမို့မို့လေးဖြစ်နေသည်။ ဇင်ဖြူ၏
ခြေဖျားတွင်ကျရောက်နေသော စကပ်လေးအား ကိုသက်ကထပ်ပြီးဆွဲချွတ်ကာ ကုတင်ဘေးသို့ပစ်ချလိုက်သည်။
“ကို့ကို ယုံစမ်းပါ ဇင်ဖြူရယ်….ကို ဇင်ဖြူကို ဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတာ ဇင်ဖြူသိသားနဲ့….ဟာ..´´
“ဒါဆိုရင်လည်းပြီးတာဘဲ…..ကို ဇင်ဖြူကိုပစ်သွားမှာကို ဇင်ဖြူကကြောက်တာ…´´
“ဇင်ဖြူကလည်းကွာ….ဟောဒီ အချစ်လေးကို ကိုယ်ဘယ်တော့မှ မပစ်ဘူးသိလား….´´
စကားပြောရင်းမှ ကိုသက်၏ လက်တွေက ဇင်ဖြူ၏စောက်ဖုတ်လေးကို အတွင်းခံဘောင်းဘီပန်းရောင်လေးထဲလက်လျှိုပြီးနှိုက်နေသည်။ ဇင်ဖြူက သိသိသာသာပင် သူမ၏ပေါင်နှစ်
ဖက်ကိုကားပေးလိုက်သည်။ ဇင်ဖြူ ပေါင်နှစ်ဖက်ကို ကားပေးတာတွေ့လိုက်ရတော့ ကျွန်မရင်ထဲမှာ တင်းကနဲခံစားလိုက်ရပါသည်။ ပြီးတော့..အံ့လည်း အံ့သြမိပါသည်။ ဒါ…ကိုသက်နဲ့
ဇင်ဖြူတို့ ပထမဆုံးအကြိမ် နဖူးတွေ့ ဒူးတွေ့ တွေ့ကြတာဆိုတာကိုလည်း ကျွန်မခန့်မှန်းသိရှိလိုက်ရပါသည်။ ဇင်ဖြူက ကိုသက်၏ ပုဆိုးကိုဖြေချလိုက်ပြီး သူကလည်း အားကျမခံ ကိုသက်၏ အောက်ခံဘောင်းဘီထဲကို လက်လေးထိုးကာနှိုက်သည်။ နှစ်ယောက်စလုံး ကာမဇောအဟုန်တွေကြွနေပြီး တုန်တုန်ယင်ယင်ဖြင့် ဖြစ်နေကြပါသည်။ ကိုသက်က ညင်သာစွာ
ဖြင့် ဇင်ဖြူ၏ အတွင်းခံဘောင်းဘီလေးကို ချွတ်ချလိုက်သည်။ ကြည့်နေတဲ့ကျွန်မရဲ့မျက်နှာဖျန်းကနဲ ဖြစ်သွားရသည်။
ဇင်ဖြူ၏ အမွှေးနုရှည်ရှည်လေးတွေက စောစောက ကိုသက်ဘောင်းဘီထဲနှိုက်၍ ပွတ်ထားတာကြောင့်လားမသိ ရှုပ်ရှက်ခတ်နေသည်။ ဇင်ဖြူရှက်သွားပုံရပြီး…..ပေါင်ကိုပြန်ပြီးစေ့
ထားလိုက်ကာ သူမ၏မျက်လုံးတွေကိုလည်း မှိတ်ချလိုက်သည်။ ကိုသက်က ဇင်ဖြူ၏စောက်ဖုတ်လေးကို ကြင်ကြင်နာနာငုံ့၍နမ်းသည်။ ဖွဖွလေးနမ်းနေရင်း သူ၏ပါးစပ်ကို စောက်ဖုတ်
နားတွင်ကပ်၍ထားသည်။ ဟိုကောင်မ ဇင်ဖြူကလည်း အခုနတင်စေ့ထားတဲ့ပေါင်ကို တဖြေးဖြေး ပြဲဟနေသည်။ ဇင်ဖြူ၏ ကိုယ်လုံးဖွေးဖွေးလေးတစ်ခုလုံးမှာ တွန့်လိမ်၍နေသည်။
ဒီတစ်ခါတော့ ဇင်ဖြူမာယာ လုပ်တာမဟုတ်မှန်းသိသာလှသည်။ ဇင်ဖြူ၏အသံက မချိမဆန့်ဖြစ်ကာ အသံလေးကျယ်သွားသည်။ ဇင်ဖြူအိပ်ယာခင်းကို လက်နဲ့အတင်းကိုင်ဆုပ်ထားပြီး
ခေါင်းလေးက ဘယ်ညာခါ၍နေသည်။ အောက်နှုတ်ခမ်းလေးကိုလည်း ပေါက်ထွက်မတတ် ကိုက်ထားသည်။
ဇင်ဖြူက ကိုသက်၏ခေါင်းကို သူမ၏ပေါင်နှစ်ချောင်းနှင့် ညှပ်ညှပ်ဆွဲရင်း ဆတ်ကနဲ ဆတ်ကနဲ ကော့ကော့တက်သွားရာမှ အရုပ်ကြိုးပြတ်ငြိမ်ကျသွားတော့သည်။ ခဏနေတော့မှ သူမ
၏ပေါင်များက ကိုသက်၏ခေါင်းကိုလွှတ်ပေးလိုက်သည်။ ကိုသက်က ဇင်ဖြူ၏ ဘေးမှဝင်လှဲလိုက်တော့ ဇင်ဖြူကယုယုယယလေး ကိုသက်ကိုနမ်းသည်။ ထိုအချိန်မှာပင် ကိုသက်က သူ၏အတွင်းခံဘောင်းဘီကို ချွတ်လိုက်တော့ ဖြတ်ကနဲပေါ်လာသော လေထဲမှာ ရမ်းခါသွားသည့်လီးကြီးက နီညိုရောင်သမ်းနေပြီး လီးဒစ်ကြီးက နီရဲ၍ပြောင်လက်နေသည်။ ကိုသက်၏
လီးကြီးကို ကျွန်မတအံ့တသြလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်မိရင်း ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင် ကျွန်မစောက်ပတ်လေးထဲကယားပြီးတက်လာပါသည်။ ဒါကြောင့် မနေနိုင်မထိုင်နိုင်နဲ့ ကျွန်မဟာပေါင်နှစ်လုံး
ကို အတင်းစေ့ကပ်ထားလိုက်မိသည်။ ကုတင်ပေါ်မှာလည်း ဇင်ဖြူက ကိုသက်၏လီးကြီးကိုတောက်ပြောင်သော မျက်လုံးလေးတွေနဲ့ ရွှမ်းရွှမ်းစားစားဖြစ်၍နေသည်။
ကိုသက် ဘာကိုဆိုလိုလိုက်သည်ကို ဇင်ဖြူက သိပြီးသား….“ဟင့်အင်းကွယ်…..ဇင်ဖြူရှက်တယ်…´´
ပါးစပ်ကသာရှက်တယ်ပြောတာ ဇင်ဖြူက အိပ်ယာပေါ်က အသာထလိုက်ပြီး ကိုသက်၏လီးကြီးကို မရဲတရဲဆုပ်ကိုင်လိုက်သည်။ လီးကြီးက သူမလက်ထဲတွင် မဆန့်မပြဲဖြစ်နေပြီး
တဆတ်ဆတ်ရုန်းကန်၍နေသည်။ ကျွန်မရင်ထဲမှာလည်း နွေးကနဲခံစားလိုက်ရသည်။ ဒီအခိုက်မှာဘဲ ဇင်ဖြူက ကိုသက်၏လီးထိပ်ကြီးကို ပါးစပ်ဖြင့်ငုံလိုက်သည်။ ဇင်ဖြူက အခန်းဝဖက်
ကျွန်မရှိတဲ့ဖက်ကို နောက်ကျောပေးပြီး ဖင်လေးကုန်းထားသဖြင့် သူမ၏စောက်ပတ်လေးဟာ ဟတတလေးဖြစ်ကာ အတွင်းသားနီနီလေးများကိုလှမ်းပြီးမြင်နေရကာ ကျွန်မစိတ်ထဲမိန်းမ
ကိုသက်ဒူးနှစ်ဖက်ကို ထောင်ထားပြီး ရင်ကိုကော့ ခေါင်းကိုမော့ပြီး မချိမဆန့်အော်ငြီး၍နေသည်။ ဇင်ဖြူကဖင်လေးကိုကော့ပြီး နောက်ကိုပစ်ထားသည့်အတွက် တင်သားအိအိလေး
တွေက ကွဲဟပြီး ပန်းနုရောင်နဲ့ အညိုရောင် ရောယှက်ထားတဲ့ စအိုဝလေးရှုံ့ချီပွချီဖြစ်နေတာကို အတိုင်းသားတွေ့မြင်နေရပြီး ကျွန်မရင်ထဲဘလောင်ဆူ၍လာရပါသည်။ ကိုသက်က အားမရပုံဖြင့် ဇင်ဖြူ၏ခေါင်းကိုကိုင်လိုက်ပြီး အောက်ကနေပင့်ကာ ဆောင့်ဆောင့်ပေးသည်။ ကိုသက်၏လီးက ဇင်ဖြူ၏ပါးစပ်လေးထဲ မဆန့်မပြဲဝင်ကာ အာခေါင်ထဲထိရောက်သွား
တော့သည်။ ဇင်ဖြူမရှုနိုင်မကယ်နိုင်ဖြစ်ကာ မျက်လုံးလေးပြူးပြီး ဖင်တရမ်းရမ်းဖြင့် ရုန်းနေသည်။ ဒါပေမယ့် ဇင်ဖြူသိပ်ကြာကြာတော့ ဒုက္ခမခံစားရ။ ကိုသက်သုတ်ရည်တွေပန်းထွက်
ပြီးတော့ ငြိမ်ကျသွားပြီး သူ့လီးကို ဇင်ဖြူပါးစပ်ထဲက အသာလေးဆွဲထုတ်ပစ်လိုက်သည်။ ဒီတော့မှ နှစ်ယောက်သား တစ်ယောက်ပါးစပ်ကို တစ်ယောက်စုပ်ပေးနေကြသည်။
စောစောက ကိုသက်ကလည်း ဇင်ဖြူဟာလေးကို ယက်ပေးထားတော့ ပေကျံနေသည်မဟုတ်ပါလား။
မသိသလိုနှင့် ဇင်ဖြူက မျက်နှာတည်တည်လေးနှင့်ပြောလိုက်သည်။ ကိုသက် သူမကိုနားမလည်နိုင်စွာ ကြည့်လိုက်တော့ ဇင်ဖြူမျက်နှာလေးက ရှက်သွေးဖြာသွားပြီး ရယ်ကျဲကျဲလေး
ဖြစ်သွားသည်။ ကိုသက်က ဇင်ဖြူမျက်နှာလေးကိုဆွဲ၍ တချက်နမ်းလိုက်သည်။ သူတို့ပြောစကားအရ ဘယ်လိုများဆက်လုပ်ကြဦးမလဲလို့ ကျွန်မစိတ်ထဲသိချင်လာသည်။ ကျွန်မပေါင်ခွ
ကြားထဲစိုရွှဲနေတာကို ၀တ်ထားတဲ့ ထဘီကိုဘဲထိုးသွင်းပြီး လက်လေးနဲ့သုတ်လိုက်ရာမှ ကျွန်မဆက်ကြည့်နေမိသည်။ ကိုသက်က ဇင်ဖြူကို ကုတင်ပေါ်တွင်နေသားတကျဖြစ်အောင်
သူမ၏ ကိုယ်လုံးလေးကိုပြင်ပေးသည်။ ပြီးတော့ အနားကစောင်ခေါက်တစ်ခုကို ဇင်ဖြူခါးအောက်သို့ ထိုးသွင်းလိုက်ရာ ဇင်ဖြူ၏တင်ပါးအစုံက မြင့်တက်လာပြီး ကော့ပေးထားသလိုဖြစ်
“ဟော…လုပ်တောင် မလုပ်ရသေးဘူး ဇင်ဖြူကလဲကွာ….´´
မူတူတူလေးလုပ်၍သာ ပြောနေသည်။ ဇင်ဖြူက ခံတော့မည့်အနေအထား ပက်လက်လေးကို လှုပ်တောင်မလှုပ် ခေါင်းလေးသာခါယမ်း၍ပြောနေသည်။ တော်တော်မူတဲ့ကောင်မလို့
ကျွန်မအမြင်ကပ်ကပ်နဲ့ စိတ်ထဲမှပြောလိုက်သည်။ စကားပြောရင်းဆိုရင်းဖြင့် ကိုသက်က ဇင်ဖြူ၏ပေါင်နှစ်ဖက်ကို အစွမ်းကုန်ဖြဲကားလိုက်သည်။ ပြီးတော့ရဲကနဲဟသွားသော သူမ၏
စောက်ဖုတ်ဝသို့ သူ၏လီးတန်ကြီးကို တေ့လိုက်သည်။ ဇင်ဖြူ၏မျက်နှာလေးက မဲ့တဲ့တဲ့လေးဖြစ်နေသည်။ ကိုသက်ကို ချစ်ပေမယ့် အတော်လည်းကြောက်နေပုံရသည်။
ဇင်ဖြူ၏စောက်ခေါင်းလေးထဲသို့ သူ့လီးကိုမသွင်းသေးဘဲ စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာကြား အကွဲကြောင်းတစ်လျှောက် သူ့လီးထိပ်ကားကားကြီးဖြင့် ထိုးမွှေပွတ်သပ်၍ ကလိပေးနေသည်။
“အဟင့်….ဟင့်….ကို ကလဲ လုပ်ချင်လဲလုပ်တော့ကွာ…ဒီမှာအနေခက်တယ်…သိလား..´´
စောစောတုန်းက ကြောက်လန့်နေတဲ့ ဇင်ဖြူက အခုလီးကို တောင့်တနေပြန်တော့ ကျွန်မသူတို့ကိုကြည့်ရင်း အံ့သြသွားရပြန်ပါသည်။
ဇင်ဖြူညီးလိုက်တဲ့အသံက ကျွန်မရင်ထဲစူးကနဲဖြစ်သွားရပြန်သည်။ ကိုသက်က ဆက်ပြီးဆောင့်မလိုးသေးဘဲ ဇင်ဖြူ၏စောက်ခေါင်းကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲတွင် သူ၏လီးချောင်းကြီးကို
ရှေ့တိုးနောက်ငင်ဖြင့် ညှောင့်ကာဆွပေးနေသည်။ ဇင်ဖြူကိုယ်လုံးလေးတစ်ခုလုံး တွန့်လိမ်နေပြီး သူမ၏ပေါင်နှစ်ဖက်ကိုလည်း ပြဲနိုင်သလောက် ထပ်၍ဖြဲပေးသည်။ ဇင်ဖြူသိပ်ပြီး
လိုလားနေတာကိုသိသော ကိုသက်က သူ့လီးကြီးကိုဆက်၍သွင်းသည်။ ဒီတစ်ခါတော့ ဇင်ဖြူသက်တောင့်သက်သာဖြင့်ခံနေသည်။ ကိုသက်၏လီးကြီးက တအိအိဖြင့်ဇင်ဖြူ၏စောက်
ဖုတ်ထဲသို့ တအိအိဝင်၍သွားသည်။ ဇင်ဖြူ၏ စောက်ခေါင်းထဲသို့ လီးကြီးတစ်ဆုံးဝင်သွားသောအခါ ဆီးခုံနှစ်ခုပြားနေအောင် ဖိကပ်၍သွားသည်။ ကိုသက်က သူ့လီးကြီးကို ဇင်ဖြူ၏
စောက်ခေါင်းထဲခဏငြိမ်ထားပြီးမှ ဖြေးဖြေးချင်းပြန်၍ှဆွဲထုတ်လိုက်သည်။ ဇင်ဖြူ၏စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးများက လီးကြီးနဲ့အတူကပ်၍ အပြင်သို့စူထွက်လာသည်။ လီးကြီးကို`
ဒစ်ဖျားလေးသာလှန်တဲ့အထိ ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးမှ ပြန်ပြီးဖြေးဖြေးချင်းသွင်းလိုက်ပြန်သည်။ မာတောင်နေသော လီးကြီးက ဖောင်းအိနေသောစောက်ဖုတ်ထဲသို့ တအိအိဝင်သွားလိုက်
ဖြေးဖြေးချင်းပြန်ထွက်လာလိုက်နှင့် ကျွန်မစိတ်ထဲ အသဲတွေယားလာသည်။
ကိုသက်က ဇင်ဖြူ၏တင်သားအိအိကြီးတွေကို သူ့လက်နှစ်ဖက်နှင့်ဆုပ်ကိုင်ပြီး ဆွဲဆွဲမကာဆောင့်သည်။ လီးကြီးက ဇင်ဖြူ၏စောက်ပတ်ထဲသို့ ၀င်လိုက်ထွက်လိုက်သွက်သွက်
လက်လက်ကြီးဖြစ်နေသည်။ ဇင်ဖြူ၏ နို့အုံလေးများတုန်ခါလှုပ်ရမ်း၍နေသည်။
ဇင်ဖြူ ဖြတ်ဖြတ်လူး၍ ကော့ကော့ပေးရင်းစောက်ဖုတ်ထဲမှ ဖြူဖြူပြစ်ပြစ်အရည်တွေ ယို၍စီးကျလာသည်။ ဇင်ဖြူပြီးသွားပြီ…။ သူတို့ကိုကြည့်နေတဲ့ ကျွန်မလဲ ယားယားတက်လာတာ
မပြောပါနဲ့တော့….ကိုသက်ကလည်း သူ့ဆောင့်အားကို လုံးဝမလျှော့ဘဲ အတင်းဖိကပ်ပြီးဆောင့်လိုးနေရာမှ ခဏအကြာမှာတော့….
မျက်နှာရှုံ့မဲ့ကာငြီးတွားလိုက်ပြီး သုတ်ရည်တွေကို ဇင်ဖြူ၏စောက်ခေါင်းထဲ ပန်းထည့်လိုက်တော့သည်။ ပြီးတော့ ဇင်ဖြူ၏ကိုယ်လုံးလေးကို ငုံ့၍ဖက်လိုက်ပြီးနှစ်ယောက်သား ငြိမ်ကျ
သွားကြတော့သည်။ ဒီတော့မှ ကျွန်မလဲအသက်ကိုဝအောင်ရှုလိုက်ပြီး နေရာကလှည့်ပြီးထွက်ခဲ့ပါသည်။ အလိုလိုနေရင်း ကျွန်မတစ်ကိုယ်လုံး နုံးချိနေတာကြောင့် ခြေလှမ်းတွေကို
မလှမ်းချင်လှမ်းချင်၊ ခြေထောက်တွေကိုအနိုင်နိုင်သယ်ပြီး အိမ်သို့ပြန်လာခဲ့ပါတော့သည်။ ကျွန်မအိမ်ကို ပြန်ရောက်တာနဲ့ပဲ ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်ဇင်ဖြူတို့အတွဲကိုကြည့်ပြီး ကျွန်မတစ်
ကိုယ်လုံးနုံးချိနေတာကြောင့်လည်း လန်းသွားအောင်ရေချိုးလိုက်ဦးမည်ဟု စိတ်ကူး၍အ၀တ်အစားတွေကိုချွတ်ပြီး ထဘီရင်လျားလိုက်ပါသည်။ ဒီအချိန်မှာဘဲ လူတစ်ယောက်က ကျွန်မ
ကိုနောက်ကနေကြုံးဖက်ပြီး ကျွန်မရဲ့ရှေ့ကမို့မောက်နေတဲ့ ရင်သားအစုံကိုပါ လက်ဝါးနဲ့တပါတည်းအုပ်ညှစ်ပြီးကိုင်လိုက်သည်။
ကျွန်မအတင်းရုန်းပေမယ့် ကျွန်မတစ်ကိုယ်လုံးသူ့ရင်ခွင်ထဲရောက်နေပြီး ဘယ်လိုမှရုန်းမထွက်နိုင်ဖြစ်နေပါသည်။ သူက ကျွန်မရဲ့နို့နှစ်လုံးကို မိမိရရကြီးဆုပ်ကိုင်ထားပြီး သူ့ဆီးခုံက
အချောင်းကြီးကလည်း ကျွန်မရဲ့ကားကားစွင့်စွင့်တင်သားအပေါ်မှ အသေဖိကပ်ထားပါသည်။
သူ့လက်ကြီးတွေကလည်းတအားသန်တာဘဲ ကျွန်မဘယ်လိုမှရုန်းမထွက်နိုင်ဘူး။ သူက ကျွန်မကိုဖက်ထားလျှက်ကနေ ဘေးမှာရှိတဲ့ကုတင်ပေါ်အတင်းလှဲသိပ်နေသည်။ နှစ်ယောက်
သားလုံးထွေးနေတဲ့ အနေအထားမှာကျွန်မရဲ့ ရင်လျားထားတဲ့ထဘီလေးက ကျွတ်ကျသွားချိန်မှာတော့ ကျွန်မအံ့အားသင့်ကြောက်လန့်လို့တောင့်ခံထားတဲ့ အင်အားလျော့သွားတဲ့
အချိန်မှာဘဲကိုထူးမော်က အတင်းဖိကပ်ပြီးသိပ်လိုက်တာကြောင့် ကျွန်မဟာကုတင်ပေါ်မှာပက်လက်လေးလဲကျကာဖြစ်သွားရပါသည်။ ကိုထူးမော်ကတော့ သူ့ကိုယ်လုံးကြီးနဲ့ကျွန်မ
အော်ဟစ်ရုန်းကန်နေတဲ့ကျွန်မရဲ့နှုတ်ခမ်းသားနှစ်လွှာကို အတင်းဖိကပ်စုပ်နမ်းလိုက်ရုံမက သူ့လက်တစ်ဖက်ကလဲ လုံးကျစ်မာတင်းနေတဲ့ ကျွန်မရဲ့နို့လေးတွေကိုအုပ်ကိုင်ပွတ်သပ်ပြီး
နေပါသည်။ ယောင်္ကျားတစ်ယောက်ရဲ့ ရင်ခွင်ထဲရောက်ပြီးနို့တွေကိုပါ ဆုပ်နယ်နေတော့အစိမ်းသက်သက် ကျွန်မဟာလိပ်ပြာလွင့်စင်မတတ် ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်မိနေပါသည်။ ကျွန်မ
တုန်တုန်ယင်ယင်နဲ့ ကိုထူးမော်ရဲ့ကိုယ်လုံးကြီးကို အတင်းတွန်းဖယ်ပစ်မိနေသည်။
ဘယ်လိုဘဲတွန်းဖယ်နေပေမယ့် အသက်ရှုသံတရှုးရှုးနဲ့ဇောထန်နေသော ကိုထူးမော်ကိုမတွန်းလှန်နိုင်ပါ။
ကျွန်မတစ်ကိုယ်လုံးတုန်ခါသွားရပါသည်။ သူကကျွန်မနို့သီးလေးတွေကိုကုန်းပြီးစို့လိုက်ပြီလေ။ သူ့ပစ္စည်းကြီးကလည်းမာမာတောင့်တောင့်ကြီးနဲ့ ကျွန်မရဲ့ပေါင်တွေကိုထိုးမိနေပါသည်။
တစ်ခါမျှမခံစားရဘူးသော၊ ထူးကဲသောအထိအတွေ့များကြောင့် ကျွန်မခင်သက်ဦး၏ အမြင်အာရုံများေ၀၀ါး၍လာရပါသည်။ ဗိုက်ပေါ်ထိရောက်နေသော ကျွန်မထဘီလေးကို သူက
အတင်းဆွဲချွတ်လိုက်တော့ ကျွန်မလက်လေးတစ်ဖက်က ကမန်းကတန်းလိုက်ပြီးထဘီလေးကိုဆွဲပေမယ့်မမှီတော့ပါ။ ထဘီကကွင်းလုံးကျွတ်ထွက်သွားလေရာ ပူနွေးမာကျော၍နေသော
ကိုထူးမော်၏လီးကြီးက ကျွန်မ၏ဆီးခုံလေးပေါ်မေးတင်၍သွားသည်။ ကျွန်မ၏ စအိုဝနှင့်စောက်ဖုတ်လေးရှုံ့၍သွားမိသည်။ သူ့…..ဟာကြီး….ငါ့ဟာ လေးထဲဝင်…..၀င်တော့မယ်….
မျက်လုံးကိုစုံမှိတ်ပြီး ကျွန်မဇွတ်ငြင်းသည်။ ရုန်းကန်နေတဲ့ကြားက သူ့လီးကြီးကစောက်ဖုတ်အကွဲကြောင်းလေးအတိုင်း လျှောတိုက်၍ပွတ်ဆင်းသွားပြီး ကျွန်မဖင်ကြားလေးထဲကို
သူက ကျွန်မရဲ့နို့တစ်လုံးကိုငုံ့၍စို့လိုက်ပြန်ပြီး လက်ကြီးတစ်ဖက်က ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်ဗိုက်နှစ်ခုအကြားထဲတိုးဝင်သွားကာ ကျွန်မစောက်ဖုတ်အုံလေးကိုဖွဖွလေးဆုပ်နယ်ပြီး
ပွတ်ပါသည်။ သူ့လီးကြီးကလည်းကျွန်မပေါင်ရင်းကနေဖင်ကြားထဲတိုးဝင်နေသည်။ ကျွန်မစောက်ပတ်ထဲမှာ ယားတက်လာတာမပြောပါနဲ့တော့…. တင်းတင်းစေ့ကပ်နေတဲ့စောက်ပတ်
နှစ်ခြမ်းကြားကနေ အရည်များယိုစိမ့်၍ကျလာသည်။ ကျွန်မတစ်ကိုယ်လုံးချွေးတွေပြန်ကာ မောလဲမော၊ နုံးလဲနုံး၊ တစ်ကိုယ်လုံးမလှုပ်နိုင်တော့ပါ။ အားအင်တွေပျောက်ကွယ်သွားပါပြီ။
ကိုထူးမော်က ကျွန်မရဲ့ရင်ဘတ်ကို သူ့လက်တစ်ဖက်နဲ့ဖိထောက်ထားရင်း ကျန်လက်တစ်ဖက်က ကျွန်မ၏ပေါင်နှစ်ချောင်းကိုဆွဲဖြဲကာ သူ၏လီးကြီးကိုအရင်းမှကိုင်၍ ကျွန်မအဖုတ်လေး
ထဲထိုးထည့်ရန် ကြိုးစားလိုက်သည်။ အရွယ်နှင့်မမျှအောင် ဖောင်းကြွမို့ကားနေသော စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ခုကိုပြဲဟကာ လီးကိုဒစ်မြုပ်ရုံမျှတေ့သွင်းလိုက်သည်။
ပြီးတော့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ကျွန်မနို့လေးတွေကိုကိုင်ပြီး လီးကိုထပ်ပြီးဖိသွင်းလိုက်ပြန်သည်။
အတင်းကြုံးအော်လိုက်ပေမယ့် အသံကလည်ချောင်းဝမှာတိုး၍သွားသည်။ သူ့လီးကြီးရဲ့အတွေ့ကလည်း ကျွန်မတစ်ကိုယ်လုံးကို ချုပ်ကိုင်လိုက်သည်။
၀င်သွားပြီ လီးကြီးကျွန်မအဖုတ်လေးထဲ တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကြီးဝင်သွားသည်။ ကျွန်မခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး တစ်စစီပြိုကွဲသွားသလိုခံစားလိုက်ရသည်။ နာကျင်စွာအော်ဟစ်ရင်း
နာလွန်းလို့စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားတွေ တစ်ဆတ်ဆတ်တုန်ပြီးငြီးငြူပစ်လိုက်မိသည်။ မျက်စိထဲမှာ မီးဝင်းဝင်းတောက်သွားသည်။ ကိုထူးမော်ကလည်း လီးကြီးကိုအပေါ်မှနေ၍
ကိုထူးမော်က မကြားသလိုနှင့်နို့နှစ်လုံးကို ခပ်ရွရွလေးဖိပွတ်ပြီးနီရဲနေတဲ့ နို့သီးခေါင်းလေးနှစ်ခုကိုလက်ကြားထဲထည့်ညှစ်၍ ပွတ်ရင်းလီးကြီးကိုထပ်၍ဖိချလိုက်ပြန်သည်။
စောက်ပတ်အောက်နားစပ်လေးကွဲသွားပြီး သွေးစလေးတွေထွက်လာသည်။ ကြီးထွားလှသောလီးကြီး၏လုံးပတ်က ကျွန်မ၏စောက်ဖုတ်လေးနဲ့မမျှ စောက်စေ့လေးမှာတဆတ်ဆတ်
တုန်ခါနေသည်။ သူ့လီးကြီးတဆုံးဝင်သွားပြီဖြစ်ပြီး…….ကျွန်မမှာနာကျင်လွန်းသဖြင့် လူးလွန့်၍နေရသည်။ ကိုထူးမော်ကလည်းသူ့စိတ်တွေထိန်းမရဖြစ်လာပုံရကာ ကွဲသွားတာကိုသိ
တအီးအီး တအားအားဖြင့်ငြီးငြူရုန်းကန်နေရင်းမှ ကျွန်မဟာအံကြိတ်ပြီးမျက်စိစုံမှိတ်ကာခံနေမိသည်။
အတန်ကြာတော့ ကျွန်မစောက်ခေါင်းတစ်လျှောက်ကျင်ပြီး အီဆိမ့်လာသည်။
ကျွန်မတစ်ကိုယ်လုံးတုန်တက်သွားပြီး ပြွတ်ကနဲ ပြတ်ကနဲ သုတ်ရည်တွေပန်းထွက်မိအောင်ကောင်း၍သွားရသည်။ ကျွန်မ ပထမဆုံးအလိုးခံရတဲ့အရသာဟာ ပြောမပြတတ်အောင်
ကောင်းမွန်လှပြီးမှိတ်ထားတဲ့ မျက်စိထဲမှာဝင်းလက်သွားသလို တစ်ကိုယ်လုံးလဲတစ်ဆတ်ဆတ်တုန်ကာ ကောင်းလွန်းလှပါသည်။ လေထဲကိုမြောက်တက်သွားသလို ရင်ထဲမှာတလှပ်လှပ်
နှင့်နင့်ကနဲ အေးကနဲ ရှိလှပါသည်။
ကိုထူးမော်က ကျွန်မကိုပြုံးပြီးကြည့်သည်။ သူကတော့ဆက်ပြီးညှောင့်မြဲ ဆောင့်မြဲပါ။ ပြီးတော့သူ့လက်တွေကလည်း ကျွန်မရဲ့နို့လေးတွေကိုဆုတ်ချေပွတ်သပ်နေပြန်သည်မို့ ကျွန်မမှာ
စောက်ဖုတ်ထဲသို့လီးကြီးက မတန်တဆထိုးဝင်လာတာကြောင့် နာကျင်တာကတစ်မျိုး၊ ပွတ်သပ်ထိုးဆွမှုအရသာများကတစ်ဖုံ အကောင်းနဲ့အဆိုးဒွန်တွဲခံစားနေမိပြီး အရှက်အကြောက်
တွေပျောက်ကွယ်ကာ….ခံ၍ကောင်းလာသည်မို့ ခြေနှစ်ချောင်းကို အစွမ်းကုန်ပြဲကား၍ကော့ကော့ပေးမိသည်။
“ခင်သက်…ဘာလို့ စောစောကလိုအော်ဟစ်ပြီး မရုန်းတော့တာလဲ….´´
ကျွန်မပေါင်နှစ်ချောင်းကို အစွမ်းကုန်ဖြဲကားပေးလိုက်သဖြင့် ကိုထူးမော်က သူ့လီးကြီးကိုအစွမ်းကုန်ဆက်တိုက်ကြီးဆောင့်သွင်းပစ်လိုက်ရာ ကျွန်မစောက်ခေါင်းထဲရှိအရည်များကြောင့်
လီးဝင်လီးထွက်ချောမွေ့ပြီး ဆောင့်ချက်များမှာထိမိလှသလို အသံများကလည်းဆူညံလွန်လှသည်။
“စွပ်….ပြတ်…ပလပ်….ပြွတ်…ပြွတ်….စွပ်….စွပ်….အင့်..အင့်……စွပ်….ပြွတ်….ပြတ်….´´ လုပ်လဲလုပ်နိုင်တဲ့သူရှင် ခုထိလိုးလို့ကောင်းတုန်း…
ကျွန်မသည်ပထမဆုံးအတွေ့အကြုံမို့ ကြောက်လန့်ထိတ်လန့်ပြီး ရုန်းကန်ငြင်းဆန်ခဲ့သော်လည်း တကယ်တန်းစောက်ပတ်ထဲလီးဝင်သွားပြီး ဆက်တိုက်ကြီးလိုးညှောင့်တာခံလိုက်ရပြန်
တော့ ကာမအရသာတွေကတစ်ကိုယ်လုံးပြန့်နှံ့သွားပြီး အီဆိမ့်သွားကာခံလို့ကောင်းလှသဖြင့် အောက်မှနေ၍ဖင်လေးကို ပင့်ပင့်မြှောက်မြှောက်ပေးပြီး အလိုးခံနေပါသည်။
ကိုထူးမော်လည်း အရှိန်ရလာပုံရပြီး ကျွန်မရဲ့နို့တွေကိုစုံကိုင်ပြီး ဖိဖိဆောင့်နေသည်။ တစ်ဖြေးဖြေး ကျွန်မရဲ့တစ်ကိုယ်လုံးလဲ အီဆိမ့်လာပြီးစိတ်ထဲမှာ မချင့်မရဲနဲ့ စောက်ဖုတ်ထဲကို
အတင်းကြီးဆောင့်ဆောင့်ဝင်နေတဲ့ သူ့လီးကြီးကို ကျွန်မစောက်ဖုတ်နဲ့ညှစ်ညှစ်ပေးမိပါသည်။ ထိုအခါမျိုးတွင် ကျွန်မကိုစိုက်ကြည့်၍လိုးနေသော ကိုထူးမော်၏မျက်လုံးများမှိတ်မှိတ်သွား
သည်ကို ကျွန်မမျက်လုံးဖွင့်အကြည့်တွင် တွေ့မြင်လိုက်ရပါသည်။
ကျွန်မအားမလိုအားမရဖြစ်လာကာ ကိုထူးလည်ပင်းကြီးကို ကျွန်မလက်လေးနှစ်ဖက်က ဖက်တွယ်လိုက်ပြီး ပေါင်နှစ်ချောင်းကို အစွမ်းကုန်ဖြဲကားပြီး ဖင်လေးကိုကော့ပေးလိုက်ရာ
ကျွန်မစောက်ခေါင်းတစ်လျှောက် အီဆိမ့်ကျင်တက်၍ ခြေဖျားလက်ဖျားလေးများ ဇိုးဇိုးဇတ်ဇတ်ဖြစ်သွားရအောင်ကောင်းသွားရပြီး ကျွန်မသုတ်ရည်များကိုဒုတိယအကြိမ်ပန်းထုတ်လိုက်
မိသည်။ မကြာခင်မှာဘဲ ကိုထူးရဲ့လီးကြီးထိပ်မှ သုတ်ရည်ပူပူနွေးနွေးပြစ်ပြစ်ခဲခဲများက ကျွန်မစောက်ခေါင်းထဲကို တဖျင်းဖျင်းပန်းထည့်ပြီး သုံးလေးချက်မျှဖိဆောင့်ပစ်လိုက်လေတော့ သည်။
Posted by အမည်မသိစာအုပ် at 08:38